Medellin dia miakatra eo amin'ireo mpandeha amerikana avaratra
Home » Toerana fitsangatsanganana » Medellin dia miakatra eo amin'ireo mpandeha amerikana avaratra
Ny Birao Medellin Convention & Visitors Bureau dia manambara ny fitomboan'ny fizahan-tany mahavariana sy mitombo miaraka amin'ny fitomboan'ny 18 isan-jato amin'ireo mpandeha avy any Etazonia eo anelanelan'ny Janoary sy Aogositra 2018, raha oharina tamin'ny tamin'ny taon-dasa. Amerikanina maherin'ny 528,000 no nitsidika an'i Kolombia tamin'ny 2017, ka 105,735 no nitsidika an'i Medellin, izay maneho ny 16 isanjaton'ny totalin'ny tonga. Ny tanàna Kolombiana fanta-daza dia niaina fanovana lehibe teo amin'ny fiaraha-monina sy ny tanàn-dehibe tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ary izy no renivohitra faharoa be mpitsidika indrindra eto amin'ny firenena. Ivon-toerana ara-javakanto sy koltoraly misongadina ao Amerika Latina, Medellin dia nanjary toeran-kaleha samihafa manintona ireo mpandeha fialan-tsasatra sy mpandraharaha ary manolotra traikefa marobe.
“Medellin dia iray amin'ireo tantara manavotra manaitra aingam-panahy indrindra, rehefa naharesy ny tantaran'ny tabatabany ho iray amin'ireo tanàna mampidi-doza indrindra eto an-tany. Androany, nanangana tanteraka ny tenany ny tanàna tamin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ny fanavaozana, ny famoronana ary ny zavakanto. Ireo mpitsangatsangana izao dia hahita tanàna miorim-paka amin'ny fampisehoana ara-kolontsaina ny mozika, dihy, literatiora, teatra ary maro hafa ”, hoy i Ana Maria Moreno Gómez, talen'ny birao fivorian'ny Convention & Visitors of Medellin. Anisan'ireo fanehoana ara-kolontsaina manorina indrindra ny dihy tango sy salsa, mozika hip hop, ary ireo silleteros izay manokan-tena amin'ny kanton'ny fampiratiana voninkazo, indrindra mandritra ny Fetiben'ny voninkazo Medellin.
Tamin'ity taona ity, Medellin dia nahazo fankatoavana iraisam-pirenena bebe kokoa, izay nanampy betsaka tamin'ny fitomboan'ny fizahan-tany. Ny tanàna dia niaina fitomboana 23 isan-jato tamin'ny mpandeha vahiny tamin'ny Janoary ka hatramin'ny Aogositra. Tamin'ny volana Janoary dia nahazo ny mari-pankasitrahana ho an'ny mpitsangatsangana 2018 tamin'ny sokajy "Toeran-kaleha ambony indrindra amin'ny fiakarana."
Ho fanampin'ireo mpandeha fialam-boly, dia nitombo ny lanjan'ny mpizahatany orinasa miaraka amin'ny fandraisan'ny tanàna tombam-bidy 83,000 2014 isan-taona ny mpandeha orinasa hatramin'ny taona 6, hoy ny ProColombia. Io dia tena misolo tena ny fivoaran'ny tanàna tsy an-kijanona, indrindra ao anatin'ny sehatry ny fivoriana. Isan-taona dia mandray hetsika iraisam-pirenena maro i Medellin miaraka amin'ny fanta-daza indrindra dia ny Smart City Business American Congress & Expo ary ny IPBES Assembly of Plenary Assembly faha-2018 amin'ny taona 2016, ny World Economic Forum ho an'i Amerika Latina amin'ny taona 2015 sy ny World General Organization General Assembly Assembly amin'ny XNUMX .
Sehatra iray manan-danja hafa ho an'i Medellin dia ireo mpitsoa-ponenana sy misotro ronono. I Kolombia dia voatanisa ho iray amin'ireo toerana 10 ambony hiala amin'ny taona 2018 amin'ny International Living. Ny firaketana dia mampiseho ihany koa ny fiakarana 85 isan-jato amin'ny fandoavam-bola amerikana any Kolombia amin'ny 2017, raha ampitahaina tamin'ny 2010, ka nahatonga azy io ho firenena ambony any Amerika Latina sy Karaiba handray izany, aorian'ny Mexico. Ity fandinihana ity dia tsy misy ireo efa misotro ronono, fa mbola tsy tonga amin'ny taona ahazoana fiantohana ara-tsosialy.
Na fitsidihana fotsiny na vao nifindra, ity metropolis an-tanàn-dehibe ity dia manome traikefa tsara indrindra ho an'ny fanitrihana ara-kolontsaina sy ny natiora, ary koa ireo hetsika mitohy, eo akaiky eo. Iray amin'ireo fananana sarobidy indrindra eto an-tanàna ny fisafidianana ireo tranombakoka toa ny Museum of Modern Art (novaina vao tsy ela), ny Museum of Antioquia (novaina vao tsy ela), ny Museum of the University of Antioquia ary ny Casa de la Memoria Museum, multimedia tranom-bakoka fahatsiarovana izay milaza antsipiriany momba ny herisetra nanjo ny firenena nanomboka tamin'ny taona 80. Misy ihany koa ny tranombakoka kely kokoa manodidina, andiam-tranomboky ho an'ny daholobe ary ivon-toeran-kolontsaina toa ny Moravia Cultural Center - izay samy miaina ao anaty tanàna avokoa.
Medellin dia mandray fety isan-taona mandritra ny taona mankalaza ny kolontsaina sy ny fomban-drazana. Anisan'ireo malaza indrindra ny: The International Tango Festival amin'ny volana Jona, izay mitondra mpandihy matihanina manerana izao tontolo izao hankalazana ny kolontsaina tango ao an-tanàna; Feria de las Flores tamin'ny volana aogositra, fetibe lehibe iray izay fankalazana ny mponina paisa an'i Medellin tamin'ny alàlan'ny hetsika maro toy ny fifaninanana, ny diabe soavaly, ny kaonseritra, sns. ary ny Fetin'ny Jiro sy ny Noely amin'ny volana Desambra, hetsika nentin-drazana nentim-paharazana izay iarahan'ny orinasa sy ny tompon-tany mankalaza ny fialantsasatra amin'ny alàlan'ny fampisehoana hazavana mihoampampana sy fampisehoana manerana ny tanàna.
Ankoatry ny fanolorana kolontsaina dia manana zavatra be dia be ho an'ny mpitia natiora i Medellin. Ao amin'ny tahiry ala Parque Arví, ny mpitsidika dia afaka mahita karazam-borona bromeliad, anthurium ary orkide mihoatra ny 160, izay atahorana ho lany tamingana. Ny dia an-kalamanjana hafa ho an'ny mpandeha dia ny fitsangantsanganana, ny agritourism ary ny bisikileta. Hetsika malaza iray hafa dia ny fijerena vorona sy lolo, izay azo atao ao amin'ny toeram-piarovana bibidia Alto de San Miguel izay mirefy 2,000 hektara. Heverina ho iray amin'ireo tanàna tsara tarehy sy mareva-doko indrindra any Kolombia i Guatapé, miorina adiny roa miala an'i Medellin, izay manolotra hetsika ho an'ny rano sy ilay Piedra del Peñol malaza, vatolampy goavambe azo akarina izay tafakatra 700 metatra ary tsy tazana ny velaran-tany sy farihy mahavariana etsy ambany.
“Miezaka ny ho tanàna fakan-tahaka i Medellin izay manintona ireo mpandeha iraisampirenena. Nandroso be ny tanàna tao anatin'izay 30 taona lasa izay, indrindra noho ireo mpitondra governemanta mahita fahitana izay fototry ny fivoaran'ny tolotra fizahan-tany sy ny antso avo manerantany. Manasa ireo mpitsangatsangana izahay hitsidika anay, hiaina traikefa miavaka, hianatra momba ny tantarantsika ary hankafizanay ireo zavatra manintona anay mba hahafahan'izy ireo mifankatia amin'ilay toerana aleha, ”hoy i María Fernanda Galeano, sekretera ny fampandrosoana ara-toekarena ao Medellin.
Eo am-pototry ny tehezan-tendrombohitra Andes roa, Medellin no renivohitry ny faritanin'i Antioquia - faritra iray malaza amin'ny toeram-pambolena kafe sy fiompiana voninkazo. Izy io dia fantatra amin'ny anarana hoe City of Eternal Spring noho ny toetr'andro mahafinaritra eo anelanelan'ny 60 ° ka hatramin'ny 80 ° F mandritra ny taona. Ny mpitsidika dia afaka manidina mivantana mankany amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Medellin Jose Maria Cordova miaraka amin'ny sidina mivantana avy amin'ny vavahady lehibe any Etazonia toa an'i Miami, Ft. Lauderdale sy New York.
Horohoron-tany 6.1 amin'ny maridrefy no namely ny Nosy Avaratra any Nouvelle Zélande
Ny faran'ny fahavaratra dia mifanojo amin'ny fihenan'ny tombom-barotra ao amin'ny hotely UK